सुवास खकुरेलको ५२ रनको योगदानपछि नेपाल ३७ रनले बिजयी (भिडियोसहित) - Gokarna News from Nepal
सुवास खकुरेलको ५२ रनको योगदानपछि नेपाल ३७ रनले बिजयी (भिडियोसहित)
मङ्गलबार, माघ २१, २०७६ by गोकर्ण न्युज
काठमाडौं– युएसएको क्रिकेट टिमबिरुद्ध सुवास खकुरेलले ८७ बलमा ५२ रनकाृे योगदान गरेका छन् । मंगलबार मुलपानीस्थीत क्रिकेट मैदानमा भएको अभ्यास खेलमा २६ बर्षका ब्याट्सम्यान खकुरेलले ५२ रनको योगदान दिएपछि नेपाली टिमले ३७ रनले खेल जितेको हो ।
काठमाडौं – काठमाडौंबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा संकलन गरिएको स्वाबको नमूना लिन गएको विमान दुर्घटनामा परेको छ
स्वाबको नमूना लिनका लागि नेपालगञ्ज गएको नेपाल एयरलायन्सको जहाज अवरतरण गर्ने बेलामा दुर्घटनामा परेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ ।नेपाल एयरलायन्सको जहाज दुर्घटना
काठमाडौं काठमाडौंबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा संकलन गरिएको स्वाबको नमूना लिन गएको विमान दुर्घटनामा परेको छ
स्वाबको नमूना लिनका लागि नेपालगञ्ज गएको नेपाल एयरलायन्सको जहाज अवरतरण गर्ने बेलामा दुर्घटनामा परेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ ।
चिनियाँ वाइ १२ ई जहाज धावनमार्गमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको हो ।
दुर्घटनामा दुई जना चिकित्सक र तीन जना चालक दलका सदस्य सकुशल रहेको विमानस्थल स्रोतको भनाइ छ ।
जहाज अवतरण गर्ने क्रममा धावनमार्गबाट चिप्लिएर जाली नजिक पुगेको थियो ।
विभिन्न स्थानमा संकल भएका स्वाबका नमूना काठमाडौं ल्याउन स्वास्थ मन्त्रालयले उक्त जहाज चाटर्ड गरेको थियो । विमानबाट लाइएका स्वाबलाई राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि लगिने छ ।
एजेन्सी – के तपाईं हरेक दिन बिहान–बिहान हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो? क्लब गएर नियमित व्यायाम गर्नुहुन्थ्यो? त्यसो भए यो आठ दिनको ‘लक–डाउन’ मा के गर्नुहुन्छ त?
व्यायामका सोखिन मात्र होइन, अरूका लागि पनि आठ–आठ दिन घरमै बस्दा मोटाइने चिन्ता हुनसक्छ। यी सबैका लागि फ्रान्सका एक ३२ वर्षीय व्यक्ति उदाहरण बनेका छन्।
रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने इलिसा नोकोमोभिचले फ्रेन्च सरकारको ‘लक–डाउन’ आदेश अवज्ञा नगरी घरै बसेर करिब ७ घन्टा दौडेर म्याराथन पूरा गरेका छन्।
म्याराथनको लम्बाइ ४२ किलोमिटरभन्दा बढी हुन्छ। उनले गत साता आफ्नै घरको २३ फिट लामो बार्दलीमा दौडेर यो दुरी पूरा गरेका हुन्। यसका लागि उनी ६ घन्टा ४८ मिनेट लगातार दौडेका थिए।
‘कति समय लाग्यो भन्ने मलाई मतलब छैन, दौडनु मेरो सोख हो,’ फ्रान्सको बालमा सहरमा बस्ने इलिसालाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनले लेखेको छ।
इलिसाले आफ्नो यो दौड कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर जुधिरहेका डाक्टर, नर्स तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई समर्पण गरेका छन्। ‘मेरो दौड ती सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि हो, जो हाम्रो ज्यान बचाउन आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर उल्लेखनीय काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
इलिसाले अहिलेसम्म ३६ चोटि म्याराथन दौडिसकेका छन्। त्यही दौड घरको बार्दलीमा पूरा गर्नुलाई चुनौतीका रूपमा लिएको उनको भनाइ छ।
बार्दलीको दुरी छोटो भएकाले तीव्र गतिमा दौडन नसकेको उनले सिएनएनलाई बताए। यही समस्याका कारण उनलाई बार्दलीमा म्याराथन पूरा गर्न जति समय लाग्यो, त्यो उनको व्यक्तिगत रेकर्डको दोब्बर हो। उनी सामान्यतया यसको आधा समयमै म्याराथन पूरा गर्छन्।
‘मेरो बार्दली सानो छ, त्यसैले यताबाट उता, उताबाट यता गरिरहनुपर्छ, यसले धेरै समय लाग्यो,’ उनले भने।
सिएनएनका अनुसार, उनले बार्दलीमा म्याराथन पूरा गर्न ३ हजारचोटि यताबाट उता र उताबाट यता दौडेका थिए। दौडका बीचमा इलिसालाई उनकी प्रेमिकाले केही खानेकुरा र पेय पदार्थ खुवाएकी थिइन्।
संसारलाई कोरोना भाइरस संक्रमणले नछोपेको भए उनी मार्च १५ मा बार्सिलोनाको सडकमा हुन लागेको म्याराथन दौडिने तयारीमा थिए। कोरोनाका कारण कार्यक्रम रद्द भयो। ‘मेरो घरको बार्दली कुनै पनि हिसाबले बार्सिलोनाको सडकजस्तो छैन, तर यहाँ दौडिनुको अनुभव पनि रमाइलो रह्यो,’ उनले भने।
इलिसाले आफ्नो यो अनुभव सार्वजनिक गरेपछि धेरै जना प्रभावित भएका छन्। फ्रान्स सरकारले यही मार्च १४ देखि अत्यावश्यक सेवाबाहेक सहरका सबै सार्वजनिक स्थल बन्द गरेको छ। रेस्टुरेन्ट, क्याफे र क्लबहरू खुलेका छैनन्। मान्छे आ–आफ्नै घरमा बसेका छन्।
यो अवस्थामा इलिसाले जस्तै घरभित्र म्याराथन नदौडे पनि आफ्नो शरीर फुर्तिलो राख्न नियमित व्यायाम र बार्दली, कौसी वा आँगनमा तीव्र गतिले दौडन सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ।
तपाईंहरू पनि आठ दिनको ‘लक–डाउन’ मा चुपचाप बस्नुभन्दा दिनको केही समय यसैगरी घरभित्र दौडने वा फटाफट हिँड्ने हो कि
काठमाडौं– नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा फुटबल प्रतियोगिताहरु स्थगित भएपछि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहेका विश्व चर्चित फुटबलर क्रिष्टियानो रोनाल्डोले आफ्ना छोराछोरीलाई हात धुन सिकाएका छन् ।
उनले आफ्ना छोरा छोरीलाई राम्रोसँग कसरी हात धुने र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ भनेर हात धुन सिकाएका हुन् ।
इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक उक्त भिडियोमा रोनाल्डोले छोरा माटेओ, छोरीहरु एलाना मार्टिन र इभालाई हात धुन तरिका सिकाइरहेका छन् । रोनाल्डोको क्लब युभेन्ट्स इटालीमा कोरोना भाइरसको आतंकसँगै बन्द रहेको छ ।
समाचार तयार पार्दासम्म इटालीमा मात्रै ४ हजार ८ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ४२ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण भेटीएका छ ।
यस्तै, २ हजार ८ सय ५७ जनाको अवस्था चित्ना जनक रहेको छ भने ६ हजार ७२ जनालाई कोरोना निको भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
काठमाडौं– अर्जेन्टिना तथा युभेन्ट्सका फरवार्ड पाउलो डिबाला र इटालीका पूर्व कप्तान पाउलो माल्दिनीलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फेला परेको छ ।
डिबालाले आफ्नो इन्टाग्राम एकाउन्टमा प्रेमिकासहितको फोटो सार्वजनिक गर्दै कोरोना प्रमाणित भएको बताएका छन् । ‘ओरिना र मलाई भाइरस संक्रमण देखिएको छ,’ २६ वर्षीय डिबालाले लेखेका छन्, ‘ भाग्यवश हामी राम्रो अवस्थामा छौं ।’
यस्तै, एसी मिलानका डाइरेक्टर माल्दिनी र उनका छोरा ड्यानीयललाई पनि संक्रमण देखिएको छ ।
माल्दिनी र उनका छोरालाई संक्रमण देखिएको विज्ञप्तिमार्फत् क्लबले जानकारी गराउँदै उनीहरुको अवस्था राम्रो रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अहिले २ हप्ता माल्दिनीका बाबु छोरा ‘सेल्फ आइसोलेसनमा रहने र त्यसपछिको समय चिकित्सकहरुको सल्लाह बमोजिम क्वारेन्टाइममा रहने क्लबले जनाएको छ ।
कोरोनाको संक्रमण भेटीएका डिबाला युभेन्ट्सका तेस्रा खेलाडी हुन् । यसअघि सेन्ट्रल ब्याक ड्यानीयल रुगानी र फ्रान्सका विश्व विजेता ब्लाइसे माटुइडीलाई पोजेटिभ भेटिएको थियो ।
इटाली सरकारले अप्रिल तीन सम्मका लागि सबै खेल गतिविधि बन्द गरिसकेको छ । अहिलेसम्म इटालीमा ४ हजार ८ सय २५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौं– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आफ्नो मातहतका भौतिक संरचनाहरुलाई अस्थायी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउनका लागि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
एन्फाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ललितपुरस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको होस्टल, बुटबल र धरानको फुटबल एकेडेमीका होस्टल र रौतहटको महिला फुटबल एकेडेमी आवश्यक पर्दा क्वारेन्टाइनका लागि प्रयोग गर्न सकिने जानकारी दिएको हो ।
एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अखिल नेपाल फुटबल संघको भौतिक संरचनाहरु ललितपुरको एन्फा कम्प्लेक्सको होस्टल, बुटबल र धरानको एकेडेमीका होस्टल, रौतहटस्थित महिला एकेडेमीको होस्टल अस्थायी क्वारेन्टाईन र आइसोलेसनको लागि आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने कुरा जानकारी गराउँन चहान्छु ।’
एन्फाले सम्पूर्णलाई आ–आफ्नो स्थानमा सुरक्षीत साथ बस्न समेत आग्रह गरेको छ । एन्फाले यसअघि नै आफ्नो कार्यालयदेखि सबै फुटबल गतिविधि बन्द गरिसकेको छ ।
भक्तपुर- कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित जोखिमबाट बच्‍न उपत्यका छाड्‍नेको जमात दैनिक बढ्दो छ । शनिबार पूर्वी नाका भएर मात्रै लगभग १ लाख ४५ हजारले उपत्यका छाडेका छन ।
अहिले पूर्वि नाका हुँदै घर फर्कनेकाे भिड लागेकाे छ । आज आतबार बिहान देखि १० बजे सम्ममा ४५ हजारकाे हाराहारीमा यात्रु बाहिरिएको जगाती प्रहरी बृतका डिएसपी चक्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
उपत्यकामा विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बसेकाहरू कोरोना भाइरसको त्रासका कारण व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर घर फर्कन थालेका छन । कोरोनको त्रासले स्कूल, कलेजहरुमा बिदा दिएपछि जन्मथलो घर जाने क्रम बढेको हो ।
उपत्यकाको पूर्वी जिल्ला काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप लगाएत तराईका पूर्व भागमा अरनिको राजमार्ग हुँदै घर फर्किनेको भिड बढेको हो ।
तर यात्रुहरु गाडि नपाएकोले असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य भएको बतान्छन । घर फर्किनेहरु कोरोना भाइरसको त्रासका कारण व्यवसाय पनि ठप्प भएपछि घर फर्किएको यात्रुहरुको भनाई छ ।
सरकारले लामो दुरीका सावारी साधन भोलिबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले पनि आज घर फर्किने यात्रुहरुको चाप बढेको हो ।
कोरोनाको त्रासले गाडिमा असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य
स्पेनमा कोरोना संक्रमित नेपालीको संख्या ७ पुग्यो
इशनाथ नरपालिकाका मेयरविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्दले दिए दुई करोड
कोरोना संक्रमणबाट कंगोका पूर्वराष्ट्रपति ओपांगोको मृत्यु
अर्घाखाँचीमा २१ बर्षीया युवती झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला